सरकारको नीतिगत निर्णय भएका कारण पूर्व निर्धारित समय अनुसार नै क्लिन फिड लागु गर्ने तयारी रहेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले बताए । ‘क्लिन फिड लागु गर्ने सरकारको नीतिगत निर्णय हो’ उनले भने– ‘नीतिगत व्यवस्था फेरी रहने भन्ने कुरा हुँदैन । साउन १ गतेबाट नै यो नीति कार्यान्वयनमा आउने छ ।’
स्वदेशी टेलिभिजन तथा विज्ञापन एजेन्सीलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य सहित सरकारले गत वर्ष क्लिन फिडको प्रस्ताव सहित आम सञ्चार नीति पारित गरेको थियो । विदेशी संस्कृतिको नकारात्मक प्रभाव रोक्न तथा स्वदेशी विज्ञापनको बजार विस्तारका लागि पनि नीति आवश्यक रहेको सरकारको ठहर थियो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मार्फत् नै साउन १ गतेदेखि क्लिन फिड लागु हुने घोषणा पनि गरी सकेको छ । क्लिन फिड नीति लागु गर्ने समय नजिकिदै गर्दा नेपाल केबल टेलिभिजन महासङ्घ, नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासङ्घ र डिस होम नेपालले असार २५ गते संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै डी.टी.एच. कम्पनी केवल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएका सबै किसिमका च्यानल बन्द गर्ने चेतावनी सरकारलाई दिएको थियो । नेपालमा ९५ प्रतिशत विदेशी च्यानल विज्ञापन सहितका रहेको अवस्थामा यहाँका लागि छुट्टै फिड उपलब्ध नरहेकाले विज्ञापनरहित च्यानल प्रसारण गर्न सम्भव नरहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख थियो ।
यस अघि भारतीय प्रसारण फोरम (ई.बी.एफ.) ले पनि नेपालमा तत्काल क्लीन फिड लागु गर्न सम्भव नभएकाले यसको मिति सार्नु पर्ने धारणा सहितको विज्ञप्ती जारी गरेको थियो । आई.बी.एफ. को एक टोलीले नेपाल सरकारका प्रतिनिधिलाई भेटेर नीति लागु नगर्न लबिङ गरेको थियो । सरकारले भने पूर्व निर्धारित समयमै यसलाई लागु गर्ने अडान कायम राखेको छ ।
यता, क्लिन फिड नीति तत्काल लागु गर्न समस्या रहे पनि विस्तारै कार्यान्वयन गर्न सकिने भएकाले नेपालका लागि यो नितान्त आवश्यक रहेको नेपाल विज्ञापन सङ्घका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘बी.बी.सी., सी.एन.एन. जस्ता विज्ञापनरहित टेलिभिजन नेपालमा प्रसारण हुन सक्ने अरू किन नसक्ने ?’ उनको प्रश्न छ । क्लिन फिड लागु भएसँगै हालको पाँच अर्ब बराबरको नेपाली विज्ञापन बजार एक वर्षमै दोब्बर हुने र यसले राजस्व पनि बढाउने उनले जानकारी दिए । नेपालमा पैसा मात्र तिरेर हेर्नु पर्ने च्यानल मात्र नभएर निःशुल्क हेर्न सकिने ‘फ्रि टू वायर’ च्यानल पनि रहेकाले सबै च्यानल बन्द हुने भ्रममा नपर्न उनले आग्रह गरे ।